I-Brekka Retreat-Indlu entsha epholileyo - I-Airbnb
I-Brekka Retreat-Indlu entsha epholileyo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguElka
Indlu entsha eyakhiwe ngo-2019 eHvalfjörður, malunga ne-50 min. ukusuka eReykjavík - Indawo egqibeleleyo yokonwabela indalo, izibane ezintle zasentla kunye nembono emangalisayo, isekufutshane nesixeko kunye nazo zonke izinto ezinomtsalane kumazantsi-ntshona eIceland.
Le ndlu encinci, ezolileyo, enhle kwaye epholileyo iya kukumangalisa ngenkangeleko yanamhlanje kodwa ifudumele kwaye ipholile ngexesha elifanayo.
Ikhabhinethi ikumntla weHvalfjörður, kwinduli ejonge emazantsi enendawo entle engqongileyo kunye nembonakalo yolwandle.
Ukusuka apho uya kukwazi ukufikelela eReykjavík ngemizuzu engama-50 kuphela kodwa uhlala ukude, ukonwabela indawo ezolileyo ekufutshane kwezinye zezinto eziphambili.
Apho uya kufumana iindlela ezinkulu zokuhamba, umzekelo ukuya kweyona ngxangxasi iphakamileyo e-Iceland Glymur, kuphela malunga ne-10 min drive.
Uneentaba zokunyuka intaba, i-Þingvellir ikwisithuba seyure kwaye ukusuka apho ungandwendwela iGeysir kunye neGolden Circle.
Entshona kukho izinto ezininzi ezinomtsalane ezinje ngeLangjökull clacier (Húsafell), kunye neSnæfellsjökull glacier phakathi kwezinye ezininzi.
Ecaleni kwendlwana ungandwendwela amahashe ethu ase-Icelandic anobuhlobo okanye uhambe uye elwandle apho unokubona khona izinja zolwandle.
Ngexesha lasebusika uya kuba nethuba lokonwabela izibane ezisemantla ngaphandle nje kwipatio okanye uzibukele kubushushu obungaphakathi ukuya kwindawo engaphezulu yeglasi ephezulu kumacala amathathu endlu.
Ikhabhinethi (emalunga ne-30m2) ifanelekile kwizibini okanye amaqela abantu aba-2-4 abahamba kunye.
Uya kufumana igumbi lokuhlambela elincinci elineshawa, iitawuli kunye nesomisi seenwele.
Umnyango uya kukusa kwigumbi lokuhlala elivulekileyo elinesitayile esishushu kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo apho uya kufumana ifriji, ioveni, isitovu, itoaster, iketile yombane, umatshini wekofu wedolce gusto kunye neembiza zokupheka.
Kwindawo evulekileyo uya kuziva umoya opholileyo apho unokonwabela ixesha elisemgangathweni phantsi kwengubo uncoma umbono omangalisayo. Sinesofa yokulala apho abantu ababini banokulala khona.
Unokuphuma ngocango lwesilayidi kwipatio enebhafu eshushu, isebenza unyaka wonke.
Kwikhabhinethi uya kufumana ibhedi yobukhulu bokumkanikazi kunye netv onokuthi uyibukele kwiNetflix.
Uqhagamshelo lwe-intanethi olulungileyo lusendlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Elka
Realtor who lives in Garðabær, Iceland with her family.
Cohost and co-owner is Barbara from Austria.
Sihlala eReykjavik kwaye unokuqhagamshelana nathi ngalo lonke ixesha.